राउटे युवतीको भाईरल टिकटक भिडियो , को हुन् ति युबक जसले राउटे युवतीको भिडियो लिदै टिकटकमा हाल्ने ? – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /भिडियो/राउटे युवतीको भाईरल टिकटक भिडियो , को हुन् ति युबक जसले राउटे युवतीको भिडियो लिदै टिकटकमा हाल्ने ?
राउटे युवतीको भाईरल टिकटक भिडियो , को हुन् ति युबक जसले राउटे युवतीको भिडियो लिदै टिकटकमा हाल्ने ?
सामाजिक संजालको बढ्दो प्रयोग साथै लोकप्रियताले कतिलाई मोडल बनायो त कतिलाई कलाकार । तिनै संजाल मध्ये टिकटक जो अहिले अत्याधिक रुचाइएको संजाल बनेको छ ।आफ्नो निखारिएको कलाहरु छोटो समयमा धेरै देखाउन सक्नु नै टिकटकको खुबि हो ।
त्यहि सामाजिक संजाल टिकटकमा अहिले सम्झना शाहि (राउटेनि) एकदमै भाइरल भैरहेकि छिन् । उमेरको हिसाबमा २० बर्ष लागेकि उनको गायन र बोलि अनि सुन्दरताको जो कोहि हामी फ्यान हौ । उनी उतिकै सालिन स्वभाविकि छिन् र उनको सोझोपनले झन उनलाई सबैको चासोको बिषय बनायो । पछिल्लो समय सम्झनासग टिकटक बनाउनेको जमात पनि सानो भने छैन् ।
टिकटक बनाउने क्रममा नै यी युवकहरुले पनि उनिसग बनाएका मात्रै हुन् । साचै निन्दनिय र बिजोक अवस्थामा छन् राउटे समुदायहरु अझै पनि । नत निश्चित छर छ नत खानको नै टुङ्गो छ नत उनिहरुलाई ज्ञान र सिपका कुराहरु नै सिकाइन्छ ।उनिहरु पिछडिएको पिछडियै भए । आजको यश शृङ्खलामा तिनै सम्झना शाहिका टिकटक भिडियो पेश गर्दछौ । हेर्नुस् भिडियो
सार्कीको छोराले बस्नेतको छोरी बिहे गरेपछि २० बर्षदेखि यस्तो अबस्था बोगदा भोग्दै-भिडियो हेर्नुहोस
रमेश प्रसाईको यो पुरानो भिडियो, जुनबेला रमेश यसरी पढ्ने, बोल्ने गर्थे (भिडियो सहित)
समाजसेवी पल शाहको हातमा वा बल-त्कारीको हातमा हतकडी ? अब ७ दिन हिरासत भित्रै बस्नुपर्ने , हेर्नुहोस
आमाको वास्तबिक जीवनको कहानी सुन्दा अन्जु पन्तको छोरीको आशु थामिएन
बिना बे’पत्ता घ’टनाको पुरै ना’लीबेली यस्तो ! बिना र प्रवेशको बीचमा कुसुमको इन्ट्री भएकै हो त (भिडियो सहित